အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: သုမ့်ဆပ် စီးခုံ မူ
ကဲ ခြေဆင်းတွေ ရှည်နေပြီ........စလိုက်ကြစို့နော်။
အမ် သုမ့်စပ်စီးခုံ မူ ဆိုပြီးတော့ ဘာကြီးလဲ လို့အပြစ်တင်မစောပါနဲ့။ တီချမ်း ထုံးစုံ အိမ်ရောက်တာနဲ့ ဗိုက်ကဆာ ဆာမှာပေါ့ ရုံးမှာ တနေ့လုံး ဘာမှ မှမစားတာ ဘယ်စားမလဲပိန်ချင်တာကိုး ပိန်တော့ဘာဖြစ်လဲ ပိန်တော့ ဘလောခ်ဘတ်တဲ့သူတွေ မနာလိုဖြစ်တာပေါ့ ပိန်တော့ လှတာပေါ့ စသဖြင့် ပေါက်ပင်နဲ့ဗျိုင်းပြီးသကာလ..... ရှည်သည့်စကားကို တိုအောင် တိုသည့်စကားကို ပို၍တိုအောင် ပြောရရင် တီချမ်း အိမ်ရောက် ဟင်းမချက်ခင် စနက်ခ်စား ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘာစားလဲကြည့်ရအောင်နော် ဘယ်လိုတွေစားသလဲ မမေးပါနဲ့ တီချမ်းက တရုတ် မြန်မာ လီရှော စပ်ထားတာပါ။ မွေးတော့ ကျိုင်းတုံမှာ မွေးပြီး ကြီးတော့ ရန်ကုန်မှာကြီးပါတယ် မြန်မာပြည်
မြန်မာအစားအစာ ကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ တရုတ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် တရုတ်စာကြိုက်ပါတယ် ဂျပန် ကိုရီးယား စာတွေ လဲရောက်ဖူး စားဖူးတော့ ကြိုက်ပါတယ် ဘိုစာတော့ သိပ်မကြိုက်ပါ။ ကုလားပြည်ရောက်ဖူးတော့ ကုလားစာလဲ ကြိုက်ပါတယ်။ (အော် သူများ သားသမီးတွေများ မကြုံကြုံအောင်ကြွားတတ်လိုက်ကြတာနော် တီချမ်းတော့ အဲ့တာမျိုးမပြောတတ်ပေါင်အေ ငတို့က ရိုးသာရယ်) လေကြောရှည်နေတာနဲ့ ရေးတာတောင် ဘယ်ရောက်မှန်းမ သိ အော် အစာပြေစားတာ ကိုပြောနေတာ ကဲ ခုနက လေကြီး လေကျယ်တွေပြောပြီးသကာလ စားတာကိုကြည့် လိုက်တော့ TADA........ပြောသားပဲ တီချမ်း က အစုံစား သတ္တဝါပါဆို တကယ်ပြောတာပါ အရင်တိုးဂိုက် လုပ်တုံး ကဆို သင်းခွေချပ်၊ လင်းနို့ မြွေ စတာတွေပါ စားဖူးတာပါ။ ကောင်းတယ် ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်။ သော်တာဆွေ့စာ
ပြဲလေ ဆိုတာလို ဖြစ်နေပြီနော်။ (အဲ့ဒီ မန်းလေးပြဲလေ ဆိုတာကို ခဏခဏ ဘတ်ဖူးတယ် ဘာပြောချင်မှန်းမသိ ဘူး) မောင်ကိုမေးကြည့်တော့ မောင်က...“ပြောမရဘူး လို့ ပြောတာတဲ့” ပြီးတော့ ထပ်ဖြည့်တယ် နင့်လိုပေါ့တဲ့
နည်းနည်းလေးထပ် လျှာ ရှည်အုံးမယ် တီချမ်း မိုတို နောက်တခုကိုက “လျှာရှည်လေ တွေ့ရှိလေ” ဆိုတာကိုးနော်။ မောင်ပေါက်ကျိုင်းလိုမျိုး မေးပါများ စကားရ သွားပါများ ဖိနပ်ပွန်း မအိပ်မနေ အိပ်ရေးပေ တွေ မဟုတ်ဘူးနော်။ အလကားပြောတာ ပိုစ့်ကို ရှည်အောင် ချဲ့ရေးနေတာ တဝကြီး ဘတ်ရအောင်လို့...... ကဲ လျှာကို စိတ်ကြိုက် ရှည်ပြီးသကာလ မှာတော့ လာပါပြီ .......
ကြုံတဲ့အခါကျတော့ ထပ်ချက်ပေးမယ်လေနော်။ ကတိပေးတာတွေများနေပြီ။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ဂျင်းစိမ်းနဲ့ မတည့်တဲ့ မိတ်သလင် တရုတ်ကြီး နဲ့ မတည့်တဲ့ ငရုတ်သီး အခြောက်ကြီးကြိုက်တဲ့ ရှောက်သီးရဲ့အရွက် မသုံးရင် မဖြစ်ဖူး ဆိုတဲ့ အုန်းပင်ရဲ့ အဖူး နဲ့ မငြင်းအခုထည့်ရမယ့် ဂျင်းနုတက် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆန်ချက်နော်..... တီချမ်း အခု အလုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ရင် အငြိမ့်ထဲလိုက်ပါမယ်။ သီးလေးသီး လိုမျိုး ကြီးလေးကြီး ဆိုပြီး တော့ပေါ့
အကြံအစည် အခုခုတော့ ရှိရမယ် ........ဟမ်း........ခေါင်းမှခေါင်း သုမ့်စပ်စီးခုံ မူ................
Posted by တီချမ်း at 3:50 PM
Vista February 16, 2012 at 5:39 PM
တီချမ်းတို့ ရိုးသာအေ မကြွားတတ်မဝါတတ်လိုက်သာမှ နိုင်ငံပေါင်းကိုစုံနေတာဖဲ ... :P
တီချမ်း February 16, 2012 at 5:58 PM
စုစုပေါင်း ၁၁ ခု အဲ့တာ ကိုရီးယားသွားတုံးက သူတို့ က လစ်လုပ်ခိုင်းလို့ လုပ်လိုက်တာ
I totally agree with Vista
Can you teach us yours traditional family clear soup making as well
thanks TT Chen
Evy February 16, 2012 at 6:16 PM
မြင်ရတာဗိုက်ဆာတယ်။ ခုချက်ချင်းတောင် စားချင်တယ်။
ချစ်ကြည်အေး February 16, 2012 at 7:13 PM
စီးခုံထက် ကြီးလေးကြီးကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်...ဟဟဟ။
အိုးထဲက အတွန့် အတွန့်လေးတွေက လာတွေလဲ။။ အာလူးကြော်တွေလိုလို....း)
မန်းလေပြဲလေဆိုတာက ဟိုးတုန်းက တိုင်းရင်းဆေးဆရာတွေနဲ့ ကုကြတော့ အနာပေါက်တဲ့အခါ ဆရာကမန်းမှုတ်လေ အနာကမပျောက်ပဲ ပိုလို့တောင်ပြဲထွက်လေမို့ ဆရာမနိုင်ဖြစ်နေတာကို ပြောတာပါ တီချမ်း :P
တီချမ်း February 16, 2012 at 11:01 PM
ano-1) check it out at here for the soup secret recipe
ဒေါ်ချစ်က စလုံးမှာ ရုံသွင်းမလို့လား အာလူးကြော်လို အတွန့်လေးတွေက အုန်းဖူးလေ
အီဗီ ရေ စားချင်ရင် ချက်စားပေါ့ ကွယ် လွယ်ကောင်းသက်သာ မြန်ဆန် အရသာရှိလေ
အားကျနေတာလား မိမြကျေး ငှဲငှဲ မကြောက်ပါနဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဘောင်းဘီ ချွတ်တာ ရှုရှုးပေါက်မလို့နေမှာပါ ညှင်းညှင်း
အနော ၂) ရေ ခုတော့ ပေါက်ပြီ ကျေးဇူးပါပဲ ရှေးဆရာတွေကလဲနော် ပြဲနေတာ ကို မန်းမှုတ်နေတယ် grey's anatomy ချုပ်ပလိုက်ပြီးရော
Anonymous February 17, 2012 at 3:42 AM
Come ..., Aussie BBG is the best
တီချမ်း February 17, 2012 at 11:22 AM
no haven't i haveaplan to visit friends there, what's BBG...?
You definitely should come. BBG = barbecue : )